जीवन जिउने कला — donnews.com
जीवन शैली विचार
रहस्यदर्शी सद्गुरु ओशो रजनीश
ओशो रजनीश आध्यात्मिक गुरु तथा दार्शनिक हुन् । ११ डिसेम्बर १९३१ मा जन्मिएका ओशोले राजनीतिज्ञ, महात्मा गान्धी र संस्थागत धर्मका बारेमा खरो आलोचना गरेका थिए । उनको सुरुवाती नाम चन्द्रमोहन जैन हो । विश्वका धेरै ठाउँमा उनका अनुयायी छन् । उनले सयौँ पुस्तक लेखेका छन् र दर्शन दिएका छन् । धर्म, जीवन, प्रेम, ध्यान, सम्भोगका विषयमा फरक ढंगले व्याख्या गरेका ओशोको १९ जनवरी १९९० मा निधन भयो । तर, उनका दर्शन अहिले पनि उत्तिकै प्रचलित छन् । सफल र खुसी जीवनका लागि उनले दिएका केही बानीलाई एजेन्सीको सहयोगमा यहाँ उद्धृत गरेका छौँ :
अहिले अहंकाररहित मानिस भेट्टाउन गाह्रो छ । कतिले त अहंकारलाई नै आफ्नो शक्ति ठान्छन् । तर, ओशोले अहंकार मानिसको ठूलो भूल भएको बताएका छन् । भन्छन्, ‘अहंकारले तत्कालका लागि खुसी त मिल्ला तर अन्तमा दुःख नै दुःख हात पर्छ । जहाँ सुरुमै सुख हुन्छ त्यसको सधैँ दुःखद अत्य हुन्छ । सुख त्यति सस्तो छैन कि जुन सुरुमै मिलोस् ।’
हामी धेरैसँग धेरैथरीका आस राख्छौँ । स्वार्थ राखेर काम गर्छौं । आफ्नो सपना पूरा गर्न कसैलाई प्रयोग गर्न खोज्छौँ । तर, ओशो यसो नगर्न सल्लाह दिन्छन् । भन्छन्, ‘तपाईंको सपना पूरा गर्नका लागि यहाँ कोही पनि छैन । किनभने, हरेक मानिस आफ्नो वर्तमान र भाग्य बनाउन लागिरहेका हुन्छन् ।’
जीवनमा मानिस जतिसक्दो दौडन चाहन्छ । कहिलेकाहीँ बस्नुप-यो या कामविहीन हुनुपरेमा दुखित हुन्छ । यस्ता मानिसका लागि ओशोको निकै सुन्दर वाणी छ । भनेका छन्, ‘जीवन आराम र गतिबीचको सन्तुलन हो ।’
ओशो सधैँ हाँस्न, मुस्कुराउन, खुसी हुन सल्लाह दिन्छन् । यसो गर्दा शान्ति छाउने उनको तर्क छ । भनेका छन्, ‘शान्तिको सुरुवात एक मुस्कानबाट हुन्छ ।’ उनले आफैँ पनि निकै हृदयस्पर्शी शब्द बोलेका छन् । भनेका छन्, ‘म अहिले मुस्कुराउँछु, हिजो मुस्कुराएकै थिएँ र भोलि पनि मुस्कुराइरहन्छु । किनभने, रोयो भने जिन्दगी छोटो हुन्छ या भनौँ जिन्दगी रुनका लागि हुँदैहोइन ।’
जीवनमा के गर्ने ? कता जाने ? कुन क्षेत्र रोज्ने ? यी प्रश्न हरेक मानिसका लागि चिन्ताको विषय हुन्छ । तर, ओशोले जीवनयात्राबारे निकै सजिलो तर्क पेस गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘जहाँ डर हुन्छ त्यो बाटोमा नजानुस् । यस्तो बाटोमा हिँड्नुस् कि जसले तपाईंलाई प्रेम र खुसीले चलाओस् ।’
मानिस अरूलाई प्रतिस्पर्धी देख्छन् र रिस साँध्नका लागि काम गर्छन् । तर, ओशोको वाणी यसको विपरीत छ । भनेका छन्, ‘कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक छैन । तपाईं आफूमा जे हुनुहुन्छ, एकदम सही हुनुहुन्छ । पहिला आफूलाई स्विकार्नुस् ।’
ज्ञानको दायरा असीमित हुन्छ । कतिलाई ममा सम्पूर्ण ज्ञान छ भन्ने भ्रम पनि हुन सक्छ । ओशोले भनेका छन्, ‘जतिवेला मैले सम्पूर्ण ज्ञान पाएको छु भन्ने लाग्छ त्यतिवेलै तपाईंको मृत्यु हुन्छ । किनकि, त्यसपश्चात् न कुनै आश्चर्य, न त आनन्द नै । त्यसपछि तपाईं मृत जीवन जिइरहेको हुनुुहुन्छ ।’
जीवनको लक्ष्य र कामबारे धेरै अनभिज्ञ हुन्छन् । कतिले त पाएको उपलब्धिलाई पनि सन्तोषका साथ हेरिरहेका हुँदैनन् । ओशोले भनेका छन् कि तपाईं त्यो बन्नुस्, जुन तपाईं सोच्नुहुन्छ कि यही नै म हुँ । यसको मतलब हो, आत्मनिर्णयलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुस् ।
धेरै मानिस आफूलाई भएभन्दा बढी बौद्धिक देखाउन चाहन्छन्, अनावश्यक प्रदर्शन गर्छन् । यो मानिसको नेचर नै हो । ओशोका अनुसार यस्तो बन्नु जीवन जिउने कला होइन । भनेका छन्, ‘बढीभन्दा बढी कम ज्ञानी हुनुस्, बच्चाजस्तो बन्नोस् र जीवनको मज्जा लिनुहोस् । किनकि, वास्तविकतामा यही नै जीवन हो ।’
ओशोले त मानिसलाई बढी गम्भीर नबन्न सुझाब दिएका छन् । उनले भनेका छन् कि गम्भीरता एक बिरामी हो, आत्माको सबैभन्दा ठूलो बिरामी । ञ्चलता मानिसका लागि सबैभन्दा बढी स्वस्थकर हुन्छ ।
हरेक चिज पहिला आफैँभित्र खोज्नुस् । नत्र तपाईं अर्को मानिससँग निर्भर रहनुपर्छ, जसले स्वयं आफैँलाई जान्दैन ।’ ओशोको यस भनाइले मानिसमा स्वयं निर्णय लिने क्षमता हुनुपर्छ भन्ने हो ।
हामी धेरैको स्वभाव हुन्छ कि बितेको समयमा हराउने । विगतका असफलतालाई सम्झने र भविष्यको मार्ग नदेख्ने । ओशोका अनुसार यसो गर्नु घातक छ । ओशोको भनाइ छ, ‘बितेको समयका कारण बोझिलो भएर नबस्नुस् । जुन पाठ तपाईंले पढ्दै हुनुहुन्छ, त्यसलाई बन्द गर्नुस् । पटक–पटक एउटै कुरामा जान जरुरत छैन । सोच्नका लागि अनगिन्ती विचार छन् ।’
जीवनमा कामचाहिँ कसरी गर्ने ? यसबारे ओशोको रोचक धारणा छ । भनेका छन्, ‘यदि तपाईं कुनै काम विनाप्रेम गर्नुहुन्छ भने गुलाम बन्नुहुन्छ । यदि त्यही कामलाई प्रेमका साथ गर्नुभयो भने राजा हुनुहुन्छ । तपाईंको काम नै तपाईंको खुसी हो ।’
साथीबारे उनको भनाइ छ, ‘कहिल्यै नसोच्नुस् कि मेरो सच्चा साथी को हो । आफैँलाई सोध्नुस्, के म कसैको सच्चा साथी हुँ ? मुख्य प्रश्न यही हो ।’
जसले तपाईंलाई दुःखी बनाउँछ, ऊ नै पापी हो । उसले तपाईंलाई आफूबाट टाढा बनाउँछ । केवल त्यस्तै मानिससँग बच्नुपर्छ ।’ ओशोको यो भनाइले जीवन जिउन सहज बनाउँछ । सधैँभरि कसैप्रति निराश भएर बाँच्नबाट बचाउँछ ।
मित्रता शुद्ध प्रेम हो । यो प्रेमको सर्वोच्च रूप हो, जहाँ केही पनि मागिँदैन, कुनै सर्त हुँदैन । जहाँ मात्र दुईबीच आनन्द हुन्छ ।
जीवन शैली सँग सम्बन्धित
सन्तुलित र आदर्श जीवनका लागि ओशो दर्शन
यी खानेकुरा खानुस्, तनाव घटाउनुस् !
दुब्लो/पातलो भएमा के खाने ? के नखाने ?
कब्जियतबाट छुटकारा पाउन हरेक बिहान के खाने ?